Ajụjụ ọnụ nke Rosa Valle, onye edemede nke Sonarás bajo las Aguas | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ajụjụ ọnụ nke Rosa Valle, Site na Lubina Josefina ka ọ bụrụ onye protagonist na Black Week nke Gijón.
Rosa Valle: Onye edemede nke Sonarás Bajo las Aguas.
Anyị nwere ihe ùgwù na obi ụtọ nke ịnwe taa na blọọgụ anyị Rose ndagwurugwu (Gijon, 1974): onye edemede, odeakụkọ, onye nyocha software, onye mmekorita na otutu media, blogger na akwukwo akwukwo akwukwo.
Onye edemede nke Ga-ada ụda n'okpuru Osimiri, akwụkwọ akụkọ aghụghọ nke onye uwe ojii nyocha Petunia ala ahịhịa nke ọhịa, ndị dị n'akụkụ Oké Osimiri Cantabrian, na Gijón, Villaviciosa, na mbuso agha na Bilbao na Zaragoza.
Akwụkwọ akụkọ: Ekwenyesiri m ike na ihe na-adọta ndị na-agụ akwụkwọ bụ na Rosa Valle na-eji otu nka wee dee akụkọ Lubina Josefina na El Salmonete Josete, karịa akụkọ ọchị dị ka Ga-ada ụda n'okpuru mmiri. Ọbụna na ị nwara iji akụkọ na-akpali agụụ mmekọahụ. Multi-genre dere?
Ndagwurugwu Rose: Enwekwara m uri, ma edebeghi m amaokwu obula, karia igosi ugwo m na netwọkụ ndi mmadu na na blog. Onye dere agwa communic. ma ọ bụ kwesịrị. Mgbe ị na-ekwurịta okwu, ị na-edozi ozi ahụ na ọwa, na onye nata, na gburugburu. Ọ bụrụ n’ịji ụfọdụ ọrụ were ngwá ọrụ ahụ, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị dee akwụkwọ ntuziaka nke onye ọrụ, ihe akụkọ, akụkọ, akụkọ, akwụkwọ ọgụgụ, obere akụkọ ma ọ bụ mkpọsa. Na njedebe, ị na-akọ akụkọ maka ndị na-ege ntị. Nke ahụ bụ nkọwa na-amasị m nke kachasị nke "Journalism" nke ọtụtụ m mụtara na Ngalaba Nkà Mmụta Ozi na ọ bụ nke na-amasị m kachasị dị ka onye edemede akụkọ ifo. Abụ m onye na-akọ akụkọ, onye na-ede ma na-anwa m ịnwale ihe niile. Ọ na-amasị m ịkọ akụkọ.
Ndị: Ga-ada ụda n'okpuru mmiri Ọ na-amalite site na nchọta ozu nwatakịrị nwanyị na Gijón Conservatory. Igbu mmadu, ihe aghụghọ ezinụlọ na ọbụna ebe ahụ ka m nwere ike ịgụ. Gendị ojii na-enwe ọ sweetụ kachasị mma kemgbe mmalite nke narị afọ gara aga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ subgenre. A naghị elezi akwụkwọ akụkọ aghụghọ anya dị ka akụkọ ntụrụndụ, kama ọ bụ ụzọ maka nyocha mmadụ na mmadụ.
Kedu ihe ị chọrọ ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị akwụkwọ akụkọ gị yana igbu ọchụ dị ka ụzọ iji dọta uche ha?
NNA: M debanyere aha gị. Dị ka onye na-agụ ihe, enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ mpụ nke nwere agba nke agba ndị ọzọ, ọ bụghị naanị oji. Akụkụ mmadụ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ka ị na-ekwu, masịrị m nke ukwuu, ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa nkata ndị uwe ojii kpara. Nke a kpatara oji m di otua. Anyị rịbara ama na ọ bụ usoro nke ugbu a na-eto eto na ụdị a. Ọ bụrụ na anyị lelee Dolores Redondo, Lorenzo Silva ma ọ bụ Eva García Saénz de Urturi, ịkpọ aha ndị edemede Spanish ole na ole, anyị ga-ahụ ihe ịtụnanya a. Otu na-ede ihe ọ masịrị ya ịgụ: ọ bụ m ikpe. The akparamaagwa nke ihe odide ahụ, ihe masịrị ha, ihe omume ntụrụndụ ha na-enye anyị ohere iji uwe ịhụnanya, ụkpụrụ, nkụda mmụọ, nye aka isiokwu ndị ọzọ ... Yabụ, na Sonarás bajo las aguas, tinyere ọnwụ na nyocha, egwu, Mmiri…
Enwere m mmasị na obi ọjọọ nke uche na nke anụ ahụ nke omume mmadụ, akụkụ gbara ọchịchịrị nke ndị mmadụ na ịchụ nta site n'akụkụ nke ọzọ, ọrụ ndị uwe ojii. Kemgbe m bụ nwata, enwere m mmasị na usoro mmebi iwu. Abịara m na akwụkwọ akụkọ mpụ mgbe e mesịrị. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ijuanya, dịka onye nta akụkọ achọghị m ịkọ ihe omume. Ọ bụ otu ihe iji mee ka akụkọ mpụ jọgburu onwe ya bụrụkwa ihe ọzọ ịbanye na mmerụ nke ezigbo ndị ahụ metụtara na gburugburu ha.
AL: You na-amalite njem njem gị site na akwụkwọ akụkọ mpụ site n'aka onye ịsị akụkọ gị, onye nyocha ndị uwe ojii si na ọdụ ndị uwe ojii Gijón, Petunia Prado del Bosque (Tunia), Ga-ada ụda n'okpuru mmiri. Nnyocha ndụ Tunia dị ogologo? Anyị na-eche ka okwu ọhụrụ?
NNA: Ọ bụrụ naanị. Ọ bụrụ na Zeus nyere m oge ahụ, enweghị m ike ịchọta ya. N'ezie, amalitela m iche banyere akụkọ ọzọ maka Tunia. Atụmatụ ahụ ka ga-eme, mana enwere m echiche ụwa. Ugbua ndị na - agụ akwụkwọ nyocha nke mbụ hụrụ na agwa onye protagonist nke ndị uwe ojii saga. Echere m na mgbe m kere Tunia, m na-echeworị banyere usoro ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, achọrọ m ịhapụ ọnụ ụzọ ahụ oghe. Ọ bụ ya mere m ji gbalịa ime ka Petunia Prado del Bosque bụrụ agwa mara mma ma dịkwa mma, iji mee ka ndị na-agụ ya mata onwe ya n’ihe bụ nzukọ mbụ ya na ha nwere. Na n'akụkụ ya, osote onye nyocha Max Muller na ndị ọzọ gburu ndị otu. Onye a tara ahụhụ na ihe ndị gbara ya gburugburu adịghịzi ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ nke mbụ ya na nzukọ ikpeazụ ya na ọhaneze, mana Tunia na ndị ya nọ. Abia m ikwu ya ma ọ bụ enwere ike ịkọwa ya.
AL: Onye na-akwado gị bụ onye na - ede blọgụ dị ka gị, ya na blog Pataleta y Bizarría, onye ọrụ na - adịghị agwụ ike, nọọrọ onwe ya yana akụkụ isi awọ nke na - eme ya, ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, karịa mmadụ. Kedu ihe Rosa nyere Tunia na Tunia nye Rosa?
NNA: Tunia bu ihe emere. Ọ dị nkọ ma maa mma karịa m: ọ ga-enwerịrị ya. Gụnyere na ọ bụ onye cop; ọ ga-abụ nwa chi siri ike. Na mpụga ọrụ ya, nke ọ bụ dinta, dinta, dịka ezigbo onye uwe ojii ọ bụla dị, ebe ọ bụ nwanyị ka ọ nọ n'etiti ụzọ. Nwanyị bara ọgaranya n'egedege ihu ya, bụ onye, ​​n'ihi afọ ndụ na ahụmịhe ya, enwetaworị ihe nfụkasị nke ndụmọdụ ndụ okenye ma, ya mere, na-eche ma mara ụfọdụ ihe ọ ga-adị. Ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ. Tunia nwere ihe masịrị m, ihe omume m, ọ na-a drinksụ biya m ma ọ dịka m na kọmputa ma ọ bụ na anyị na-etinye uwe ogologo ọkpa anyị n'otu ụzọ ahụ. Anyị bụ ụmụ nwanyị abụọ dị iche iche, mana yana njikọ a na-apụghị ịgbagha agbagha, ekwere m. Ndị ma m ma na-agụ ya na-ahụ ihe m na ya. Ọ bụghị nzube m. Echere m na, itinye onwe m n'ime akpụkpọ ụkwụ ya, ahapụwo m nke m n'ime ya. Ọ bụrụ na ị metụ ogwe osisi ahụ, dee blọọgụ ma chee na njikọ ahụ pụrụ iche na mmiri, yana oke osimiri na osimiri, ọ bụ n'ihi na echere m na, mgbe m na-anaghị akọwa atụmatụ nke ndị uwe ojii, achọrọ m ịkọwa ihe Ọ masịrị m: ọdịdị, osimiri, ọgba tum tum… O doro anya na Tunia enweghị ike inwe mmasị na bọlbụ, dịka ọmụmaatụ.
Ga-ada ụda n'okpuru Mmiri: Atụmatụ aghụghọ n'ụsọ Oké Osimiri Cantabrian.
AL: N'agbanyeghị eziokwu na anyị bi n'otu n'ime mba nwere ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ kachasị dị ala n'ụwa, yana na n'ụsọ oké osimiri Cantabrian ọ dịkarịrị ala karịa ọnụ ọgụgụ mba, gịnị ka ebe ugwu nwere nke na-akpali ụdị akụkọ aghụghọ dị otú ahụ?
NNA:Phew, ugwu! Ebe ugwu anyị, Cantabrian. N’ebe a onye ode akwukwo n’eji oji nwere ihe nile ichoro n’enweghi acho muses na mba ozo. Kemmasi eke na wuru mma n'otu oge. Ndị mmadụ, gburugburu ebe obibi, ụkpụrụ na ntụpọ… …nye na-enweghị mmasị na Asturias? Kedu ndị ndị Asturi na-enweghị mmasị? Echere m na anaghị m emehie dịka nnukwu nwanyị ma ọ bụ dị ka onye ìsì ma ọ bụrụ na m zaa na "ọ dịghị onye". Ahụmịhe m bụ na mpaghara a hụrụ n'anya na Spain niile, n'ihi na ọ meriri. Asturias nwere naanị ndị enyi. A gaara m akpọ Tunia gaa ọdụ ndị uwe ojii mba ọzọ, mana agwa obodo ahụ m na-achọ bụ n'ụlọ. Ma, ọ bụrụ na onye nyocha m ruru n'ọkwa transregional, yabụ, dịka onye edemede dị umeala, obi ga-adị m ụtọ inye aka gbasaa ala m na akụ na ụba ya site na akwụkwọ. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe a na-ahụkarị n’etiti ndị edemede ọhụrụ ụdị a ịchọpụta atụmatụ ndị pere mpe na obere ime obodo, obere njem gara ugbu a site na mkpụrụedemede gbara ọchịchịrị. Ma, achọghị m ịkwụsị ịga nnukwu obodo. A tụfuru m Madrid ma ọ bụ Barcelona, ​​nke ndị isi dị ka Vazquéz Montalbán ma ọ bụ Juan Madrid ji mee ihe, echekwara m banyere Zaragoza, onye mmụọ ya na àgwà ya dabara nke ọma na ihe m chọrọ. Ọ bụ ya mere akụkọ ahụ ji eme n'etiti Asturias na Zaragoza, na nkwụsị na Bilbao 😉
AL: raryzọ edemede na ntọala nke akwụkwọ akụkọ gị, Gijón na obodo ndị gbara ya gburugburu. Kedụ ka ahụmịhe nke ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị bi n'ebe ndị sitere n'ike mmụọ nsọ gị? Ikwughachi? Anyị ga-enwe ohere ọzọ isoro gị?
NNA: Ọfụma, ọmarịcha ahụmahụ dị mma, na mgbakwunye na eziokwu ahụ emeela ka m nwee nnukwu nkwupụta na Municipal Foundation of Culture of Gijón na netwọọdụ nke ọba akwụkwọ ọha họọrọ ọrụ m iji kwupụta ụzọ akwụkwọ Sonarás n'okpuru mmiri dị n'obodo anyị. . Maka onye edemede ọhụrụ ọ bụ nnukwu ụgwọ ọrụ mmụọ. Ndị Council Council agbanweela ụzọ agụmakwụkwọ ndị a, na mgbakwunye na ịme ha n'ụzọ nkịtị na njem, dịka o kwekọrọ na Xixón Book Fair, dịka ọmụmaatụ, etinyela ha na ntanetị oge niile n'etiti akụ na ụba obodo. Na Tunia nwere oghere ebe ahụ na ndị na-agụ ya na-ahọrọ ya bụ nsọpụrụ. Nganga na obi ekele, n’enweghị mgbagha.
AL: Ọbịa na Black Week nke Gijón, otu n'ime ihe omume kachasị mkpa nke ụdị ebe ị ga-anọdụ ala na nnukwu na nke gbara ume nke ụdị. Olee otú obi dị gị? Kedu ihe mmata a pụtara Rosa Valle na Tunia Prado del Bosque?
RV: Ebe ọ bụ na m malitere njem a, agwara m onwe m na, na Black Week, m ga-abụ. Enweghị m oge iji nwaa asọmpi mba ndị ọzọ nke ụdị a, nke na-amalite ịbụ igwe mmadụ, mana enwere m nke a n'ụlọ ma ọ bụ ebe obibi nke ndị ọzọ. Agbakwasịwo m ya dị ka onye nta akụkọ na dị ka onye na-agụ ihe. Ugbu a, m ga-anụ ụtọ ya dị ka onye edemede. Nsọpụrụ ọzọ m na-agbakwunye. Enwere m ekele maka Organizationtù ahụ maka imeghe ọnụ ụzọ asọmpi ahụ yana ndị edemede ndị ọzọ. Afọ ole na ole gara aga, echetara m na m gara ebe ahụ iji zute Dolores Redondo, onye m bụ onye ofufe. Ka m na-abịakwute akwụkwọ ọhụụ ya ka ọ bịanye aka, ekwuru m na m na-edekwa akwụkwọ akụkọ mpụ na o gosipụtara ya na nraranye ya. Eji m nku pụta ebe ahụ. Dị ka onye na-eto eto nwere mbinye aka nke onye na-abụ abụ ejiji. Freaked pụọ.
AL: Na blọọgụ gị ị na-eme usoro ọgwụgwọ, ị na-ekwu maka ihe niile ịchọrọ, gbasara akwụkwọ, maka ntụgharị uche onwe gị n'okwu dịgasị iche iche ma ọ bụ ọbụlagodi tampon, gịnị kpatara ya? Gwa anyị ntakịrị ihe. Kedu ihe ị nwetara na gịnị ka ị ga-enweta site na usoro ọgwụgwọ akwụkwọ edemede a?
NNA: Ejiri m ozi m; mgbukepụ, oge ụfọdụ, na ntụgharị uche miri emi, ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ ha na-emekọ ihe omume ntụrụndụ m, dịka egwu, akwụkwọ na njem, ma mgbe ụfọdụ anaghị eme ya. Ndị ọzọ bụ isiokwu amụrụ site na ahụmịhe biri na igodo transcendental. Amụtara m ogologo oge gara aga na ụwa enweghị ike idozi, mana anyị hụrụ n'anya na-anọgide na-edozi ya site n'okwu, nri? E nwere oge, mgbe m na-edeghị ọrụ na ebumnuche nke ibipụta ha, mgbe blọọgụ bụ ezigbo ọgwụgwọ. Mgbe ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, mgbe ụgbọ gị mebiri, dee. Mgbe ọ you'reụ juru gị obi, dee ya. Obi ga-adị gị mma. Usoro ọgwụgwọ m bụ Pataleta y Bizarría de Tunia. Agbaziwo m gị tiketi m. Kedu ihe kpatara m ga-eji dee ndị ọhụrụ maka agwa m ma ọ bụrụ na m cheworị ma dee tupu oge ahụ banyere ihe m chọrọ ka ọ gwa. Edemede otutu na uchem ma oge adighi m itinye ya na akwukwo ma obu na enyo. N'isi m, mmekọrịta dị n'etiti ihe dị adị na mmetụta uche, n'etiti ụkpụrụ na mgbọrọgwụ, n'etiti nkụda mmụọ na agụụ na-ejide ma zụlite. Ha na-amalite ije ije naanị ha na ndụ anụ ahụ oge ụfọdụ na-ahapụ m itinye ụzọ maka ha na mgbe ụfọdụ ọ bụghị.
AL: Ọ bụ ezie na anyị maara na ị bụ ezigbo onye ofufe nke Dolores Redondo, gwa anyị ntakịrị ihe gbasara onwe gị dị ka onye na-agụ akwụkwọ: Gịnị bụ akwụkwọ dị n'ọbá akwụkwọ gị nke ị na-agụgharị kwa afọ ole na ole ma na-enwe ọ enjoyụ ọzọ dị ka oge mbụ? E wezụga Dolores Redondo, enwere onye ode akwụkwọ ị nwere mmasị na ya, ụdị ị na-azụta naanị ndị a na-ebipụta?
NNA: Enwere m olile anya na anaghị m emechu gị ihu, mana… Ọ dịghị mgbe m gụchara akwụkwọ! Anaghị m achọ ikiri ihe nkiri ugboro abụọ. Abụ m onye na-agụ ndị edemede. Mgbe m chọtara ihe masịrị m, anaghị m ahapụ ya wee gafere ọrụ ya niile na-aga n'ihu ruo mgbe m tufuru ya. Ihe atụ? Anyi na eso onye ojii, ebe anyi no n’ime ya. Lorenzo Silva, Manuel Vázquez Montalbán, Rosa Ribas, Andrea Camilleri, Alicia Jiménez Bartett (maka mụ onwe m, nwanyị ojii ndị Spain)… N'ime ndị edemede ọhụụ, aga m agbaso nzọụkwụ Inés Plana, Ana Lena Rivera. Na mpụga ụdị mpụ ahụ, enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ Spanish oge a, isiokwu nke Spanish Civil War na oge agha na oge a na-agbasawanye na ọha mmadụ taa, ndị mmeri na-enweghị ọdịiche mmekọrịta ọha na eze, ụdị ya. Akwa Delibes na ọgbọ ya nke akwụkwọ akụkọ mmekọrịta na taa Almudena Grandes, Clara Sánchez… Ọtụtụ na ọtụtụ. Womenmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke, n'agbanyeghị. Anaghị m agụ akwụkwọ ozi ndị mba ọzọ dere. Site n'èzí, m na-anwale ndị edemede ole na ole na nkwanye nke onye na-ede akwụkwọ enyi. Ami ndi emana emi ekekotde mme eset ke ufọkn̄wed, ọtọn̄ọde ke Amadís de Gaula ye Don Quixote tutu esịm Catilinarias ke Latin. Ọ bụrụ na m gụọ, dee ma nwee mmetụta na leta ọ bụ n'ihi na enweela m ndị nkuzi edemede akwụkwọ mara mma, na ngalaba ahụ.
AL: Oge nke mgbanwe maka ụmụ nwanyị, n'ikpeazụ feminism bụ okwu maka ọtụtụ ma ọ bụghị naanị maka obere ụmụ nwanyị ole na ole ụmụ nwanyị mejọrọ maka ya. Gini bu ozi gi na obodo banyere oru umu nwanyi na oru anyi na-aru n’oge a?
NNA: Echere m na anyị ka nwere ọtụtụ ihe ị ga - emeri na m na-ekwu maka Spain, n'ihi na mba ndị na-enweghị ọchịchị onye kwuo uche ya, ọ pụtara na ịbụ nwanyị bụ ihe ihere. Ọ na-ewute m mgbe, n'oge ụfọdụ ụbọchị, dị ka Women'sbọchị Ndị Inyom, ụmụ nwanyị na-atụ okwute megide nwanyị na okwu ha na netwọkụ. Womenmụ nwanyị ahụ nwere ọ happyụ na obere ebe ha nọ na obere ụwa nkasi obi ha. Mba mba; mba ma'am. Anyị enwetabeghị nha anya, ya bụ, enweghi ụmụ nwanyị zuru oke na-ebuli olu ha megide machismo, nke dịkarị n'ụdị obi ọjọọ na kwa ụbọchị n'ụdị dị ụtọ karị. Anaghị m amasị radicalism, si n'akụkụ ma ọ bụ mkpisi ha na-abịa. O nweghikwa ka nwanyị nwanyị na-eme ihe ike, nwanyị na-eme ihe ike na nke jọgburu onwe ya nke na-azọda ụkwụ. Mana nwanyị ọ bụla bụ nwanyị, ọ kwesịrị ịdị, ọbụlagodi na ọ maghị ma ọ bụ gọnarị ya. Ekwenyesiri m ike na ịbụ nwoke dị mfe karị. Ọ bụrụ na a mụrụ m ọzọ, m ga-achọ ịbụ onye obodo, m na-ekwukarị. M na-ekwu ya. Womenmụ nwanyị ga na-arụ ọrụ ma na-alụ ọgụ karịa, na ndụ, na ibu arọ, na mmetụta; megide ajọ mbunobi, megide enweghị oke, megide oge, ọbụlagodi.
AL: N'agbanyeghị ọdịdị ọdịnala nke onye edemede edepụtara, gbachiri ma na-enweghị mkparịta ụka mmekọrịta, enwere ọgbọ ọhụụ nke ndị edemede na-ede tweet kwa ụbọchị ma bulite foto na Instagram, bụ ndị ndị na-elekọta mmadụ na-ekwurịta okwu na ụwa. Kedu ka mmekọrịta gị na netwọkụ mmekọrịta dị? Kedu ihe na-eche Rosa Valle, akụkụ ya dị ka onye na-ekwurịta okwu ma ọ bụ onye edemede na-enwere anya maka nzuzo ya?
NNA: Echere m na, ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ọha, ị ga-anọ na netwọk ahụ ee ma ọ bụ ee, n'ihi na ịntanetị ị ga-abụ ee ma ọ bụ ee. Otu a dijitalụ. Ihe ọzọ bụ na dị ka mmadụ, dị ka Rosa ma ọ bụ Ana Lena, ị kpebiri ime ya ma ọ bụ. "Ọ bụrụ na ihe ị ga-ekwu adịghị mma karịa ịgbachi nkịtị, ekwula ya." Ọfọn, otu na netwọk mmekọrịta. Enwere ozi, eserese na ederede n'ime ha, na-atọ ụtọ, nke onwe ma ọ bụ na ọ bụghị, na ndị ọzọ na-enweghị mmasị na onye ọ bụla, ọbụnadị ndị enyi kachasị. Ana m eji Facebook dịka netwọkụ nkeonwe na Twitter na Instagram naanị maka ọrụ edemede m, mana anaghị m ebugharị ha. Amaara m otu esi eme ya, n'ihi ọrụ m, mana… Anaghị m enweta ihe niile. Enweghị m ike na enweghị m ikike inwe onye njikwa obodo. Otu enyi m nta akụkọ tụbara m eriri, nwa oge, mana ugbu a, m laghachi na nke a naanị na ... buff. Iji jikwaa netwọk gị nke ọma, ị ga-eji oge dị ukwuu kpochapụ, na-achọ ndị na-ede akwụkwọ, na-ekele, na-enwe mmetụta ... know maara ya nke ọma. Ka anyị kwuo na m nọ n'ime ha n'ụzọ ịgba ama. Ha abughi nnukwu ma obu ndi ojoo. Ihe niile dabere na iji ha mee. Nkwukọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya merie ma tufuo ya.
NNA: Hmm. O siri ike ịza, n'ihi na, dị ka ndị na-azụ ngwaahịa a, anyị niile na-apụnara mmadụ ma ọ bụ mee ya n'oge ụfọdụ na mmiri iyi. Hacking dị njọ mgbe niile. Ihe ọzọ bụ ịkekọrịta ibe, mepee ọnụ gị ...
NNA: Ruo mgbe ebighi ebi. Imetụ ya aka, isisi ya, ka ọ mata ya, ka ị lekọta ya, ka ọ baara ya nsị. Na dijitalụ ihe niile dị oyi: ma ọ bụ? Ugbu a na usoro dijitalụ nwere uru ya, ọ dịghị onye na-agọnahụ ya. Bara uru, mana na-enweghị amara. Na akwukwo, dika ihe omume obi uto na ntinye obi, nwere otutu akwukwo. Mass, site na bench.
AL: N'ikpeazụ, m na-arịọ gị ka ị nye ndị na-agụ akwụkwọ ntakịrị gbasara onwe gị: Kedu ihe mere na ndụ gị na ihe ndị ị chọrọ ime site ugbu a?
NNA: Ana m ewere onwe m dị ka onye nwere ihu ọma na ndụ m na nke aka ya, mana abụkwa m nnukwu onye na-ekweghị ekwe na nke ahụ bụ igwe na-adọkpụ. I lee anya n’akụkụ ma ọ dị mgbe ọ bụla onye ka gị mma; i lee ibe ya anya, o nwekwaa onye ka ya njọ. Anyị na-eleghara ihe anyị na-enweghị anya na ọ bụ mmeghe nke ndị na-ekweghị ekwe na-eme. Nke a apụtaghị na anyị amaghị etu anyị ga-esi jiri ihe anyị nwere kpọrọ ihe. Ihe dị ezigbo mkpa mere na ndụ m nke m na-ekele Chineke. Yabụ na ndụ ọkachamara m, anaghị m eme mkpesa. Enweela m ike ịmụ ihe m chọrọ, bie ndụ mahadum dị egwu na ọkwa niile, gaa n'ihu na-azụ ọzụzụ, emesịa, na ngalaba ndị ọzọ ma rụọ ọrụ na ọrụ m. Ọ ga-amasị m ịga n'ihu na-arụ ọrụ dịka onye nta akụkọ nke ugbu a, mana, ọ dị nwute, ụlọ ọrụ ndị nta akụkọ na-agbada ala na-enweghị brek. Ọnọdụ ọrụ dị oke njọ na ohere maka ndị ọkachamara guzobere, pere mpe. M ga-ekwu maka ajụjụ ọnụ ọzọ iji weghaa ọrụ nke ọrụ nta akụkọ taa. Ka o sina dị, ọrụ m na-arụ ugbu a na-amasị m ma na-enwe ekele maka ohere akwụkwọ nyere m. Anọgidere m na-akọ akụkọ, na-eme ihe ọmụma, na-ata ya ma na-agbanwe ya. Na isi, otu ogwe dị ka akwụkwọ akụkọ.
Ga njem tere aka bụ ohere ọzọ m ga-achọ ọdịnihu ijide m. Nnukwu njem ndị ahụ anyị na-awagharị na-awagharị. Ndụ a na-ajụ onye ọzọ, Ana Lena.
Daalụ, Rose ndagwurugwu, chọrọ ka ị nọgide na-achịkọta ihe ịga nke ọma n'ihe ịma aka ọ bụla ị na-eme na nke ahụ Ga-ada ụda n'okpuru mmiri be the first of great a saga nke ebube akwụkwọ akụkọ ga-eme ka anyị na-enwe gị na-agụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ nke Rosa Valle, Site na Lubina Josefina ka ọ bụrụ onye protagonist na Black Week nke Gijón.
Duke nke Rivas. Ememe ncheta nke onwu nke Don Álvaro ma obu ikike nke akara aka